NK | सूर्योदय महोत्सवको निम्तो : कहाँ घुम्ने, कहाँ रम्ने ?
सूर्योदय महोत्सवको निम्तो : कहाँ घुम्ने, कहाँ रम्ने ?
युवराज गौतम/काठमाडौं :- ‘ग्रीन कार्पेट’ अर्थात डाँडाभरी सुन्दर चियावारी, सुसाइरहेका सल्लाहरु, नागबेली सडक, लाप्चाहरुको गर्भिलो इतिहास, स्वच्छ हावापानी र रमाइला गाउँलेहरुसँग रमाउन इलामले सबैलाई तान्छ । त्यतिमात्र होइन हनिमुन मनाउन र प्रेम जोडीहरु चियाबारीमा हराउन इलामलाई रोज्ने गर्छन । प्रकृतिप्रेमीहरु सुस्केरा हाल्न हरिया डाँडातिर उक्लिन्छन् । नेपाललाई पहिलो पटक स्पर्स गर्ने सूर्योदयको दृश्य नियाल्न मानिसहरु अन्तुडाँडातिर सोझिन्छन् ।
नेपाललाई प्रकृतिक रुपमा प्रसिद्धी दिलाउने यस्तै ठाउँ मध्येको एक हो इलामको सुर्योदय नगरपालिका । जहाँ प्रेमील जोडीदेखि, चिया पारखी र प्रकृतिप्रेमीहरु सूर्योदयका गन्तब्य फन्को लगाउँदा स्वर्गीय आनन्दको अनुभुति गर्छन । वास्तवमा यही सुरम्य गन्तब्यले हजारौं पर्यटकलाई भुल्याइरहेको छ ।
पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ प्रवेशद्वार पनि हो सूर्योदय नगर । इलामका सबै पर्यटकीय स्थलको भ्रमण प्याकेज बनाउँदा सूर्योदयकै द्धारबाट प्रवेश गर्नुपर्छ । टुर एन्ड ट्राभल्स कम्पनीहरुलाई इलामको ‘आइटिनेरी’मा सूर्योदयका प्वाइन्टहरु समेट्नै पर्ने बाध्यता छ । कन्याम होस् वा श्रीअन्तु अनि माइपोखरी, सन्दकपुर नै होस् वा भारतको दार्जिलिङ्ग र मिरिक नै किन नहोस् सबैको प्रवेशद्धार सूर्योदय नगरपालिका नै हो । सरकारले विकास गर्नुपर्ने एकसय पर्यटन गन्तब्यको सूचीमा सूर्योदय समेटिएको छ ।
सूर्योदय नगर भित्रको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा प्रत्येक विहीबार लाग्ने हटिया पर्यटकलाई भूल्याउने माध्यम हो । बजारमा किनमेल गर्न जोकोही पर्यटक एक पटक फन्को लगाउन रुचाउँछन् । त्यस बाहेक पाँचथर, ताप्लेजुङ, सिक्किम दार्जिलिङ घुम्न आउने पर्यटक फिक्कललाई सपिङको केन्द्र विन्दु नै बनाउँछन् । त्यसैले फिक्ललबजार हटिया भर्न र कोशेलीहरु किनमेल गर्न पर्यटकका लागि भरपर्दो गन्तब्य हो ।
ललिपप, छुर्पी, बम्बइसन, चियापत्ती लगायतका खाद्य सामाग्रीहरु सूर्योदयन गरको कोशेलीका रुपमा पर्यटकले किनमेल गर्न सक्छन् । पशुपतिनगर चाइना उत्पादनका सामाग्री किनमेल गर्न अब्बल सपिङ गन्तब्य हो । दार्जिलिङ, सिक्किम, मिरिक घुम्न जान पशुपति नाका पार गर्नैपर्छ ।